redBus အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
16.6.1 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（27.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် redBus - Online Bus Tickets and Ferry Booking App
စင်ကာပူ၏ ဦး ဆောင်ဘတ်ဘွတ်ပြားကြိုတင်ဘွတ်ကင်စင်တာ Redbus သည်အွန်လိုင်းဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိပြီးအဆင်ပြေသော app ကိုပေးသည်။ Redbus အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူစင်ကာပူရှိဇိမ်ခံဘတ်စ်ကားများပေါ်တွင်လုံခြုံပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောဘတ်စ်ကားခရီးသွားလာသည့်ကမ္ဘာသို့သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မည်။
စတင်ရန်သင်လုပ်ရန်သင်လုပ်ရမယ် သင်၏ Pick-up နှင့် Destination Points နှင့် Travel ၏နေ့စွဲ။ "filters" option ကိုအသုံးပြုပြီးဘတ်စ်ကားအော်ပရေတာများ, သာယာဝပြောမှုများ, ဘတ်စ်ကားအမျိုးအစားများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုလုံခြုံသောပေါ်တယ်ပေါ်တွင်ဖြည့်စွက်ပြီးသင်အားလုံးသည်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင်နာရီအနည်းငယ်နှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။ Redbus အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်အွန်လိုင်းဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါသင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
Redbus app သည်သင်၏လက်ဖဝါးတွင်အဆင်ပြေပါသည်။ အွန်လိုင်းဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်, အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုချန်ထားပါ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေးများကိုရယူပါ။ ဤတွင်သင်သည်ဤအခမဲ့ Pass ကိုဘတ်စ်ကားခရီးသွားလာသည့်ကမ္ဘာသို့သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အခါဤနေရာတွင်သင်ရရှိသောအခွင့်အရေးအချို့ကိုသင် downlok ⭐
Transbus ၏ပဏာမခြေလှမ်းများသည်ခရီးသည်များကိုစောင့်ရှောက်ရန် The Redbus မှအစပြုလုပ်ဆောင်ခြင်း ခရီးသည်များသည်အစိုးရမှသတ်မှတ်ထားသည့်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာသည်။
Redbus app သည် download လုပ်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်, သင်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်အတွက်သာပေးဆပ်ရန်သာလိုအပ်သည် သူတို့ကိုသင်စာအုပ်! Redbus သည်ကြိုတင်မှာယူခခမယူပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဘတ်စ်ကားကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းတွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုရရှိရန်အတွက်အာမခံထားပါ။
back backbacks နှင့် Offers:
Redbus သည်သင်၏အနီရောင်ကူပွန်များနှင့်သင်၏အနီရောင်ကူပွန်များနှင့်သင်၏အနီရောင်ကူပွန်များကိုပေးသည် သိသိသာသာငွေပမာဏအားဖြင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ။ သူတို့ကိုဟိုတယ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏လက်မှတ်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်သင်အွန်လိုင်းဘတ်စ်ကားဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည့်အချိန်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အဆင့်အခမဲ့ခရီးသွားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
B> Go Go: Download Redbus အက်ပ်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်သို့နှင့်အချိန်မရွေး, အချိန်မရွေး log in လုပ်ပါ။ သင်သည်ခရီးသွားနေစဉ်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်များကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဘွတ်ကင်များနှင့်ခရီးသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Redbus သည်စင်ကာပူရှိဘတ်စ်ကားအော်ပရေတာ Titans နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ catalog သို့အကောင်းဆုံးဘတ်စ်ကားများထဲမှအကောင်းဆုံးဘတ်စ်ကားများကိုသာယူဆောင်လာရန်။ TransNons, Transtar, Starmart နှင့် Causeway link အပါအ0င်လူကြိုက်များအော်ပရေတာများမှရွေးပါ။
Redbus သည်စင်ကာပူနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်မလေးရှားစသည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ။ သင်သည်ကွာလာလမ်ပူမှစင်္ကာပူမှစင်္ကာပူမှလာမည့်အနိုင်အတ်သို့မဟုတ်စင်္ကာပူမှကွာဟချက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့သွားသောအခါသင်ဘတ်စ်ကားတစ်စီးကိုသင်ဘွတ်ကင် လုပ်. သင်မြင်တွေ့နေစဉ်အမြင်များတွင်စိမ်နိုင်သည်။
သင်၏ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲစေပါကသင်ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် Redbus အက်ပ်မှတိုက်ရိုက်ငွေပြန်အမ်းရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှသည်သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအသေးစိတ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ ⭐ 24/7 Support:
Redbus အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူသင်ရရှိသည် လူ့စာနာမှုနှင့်0န်ဆောင်မှုကိုထိတွေ့မှုနှင့်အတူ။ Redbus Customer Care Team သည်သင်၏ဘွတ်ကင်များ, သင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာမှဖြစ်ရန် Redbus app သည်၎င်းကိုဖြစ်ပျက်စေသည်။ Redbus အသုံးပြုသူများသည်စင်္ကာပူ, စင်္ကာပူ, စင်္ကာပူ, စင်္ကာပူ, စင်္ကာပူ, စင်္ကာပူ, စင်္ကာပူသို့စင်္ကာပူသို့မကြာခဏထိပ်တန်းလမ်းကြောင်းများမကြာခဏထိပ်တန်းလမ်းကြောင်းများမကြာခဏဖြစ်သည်။ သင်၏ဘတ်ဂျက်သို့မဟုတ်ခရီးသွား Preferences သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ, ၎င်းသည်ဇိမ်ခံအိပ်ဖူးသူသို့မဟုတ်မရပ်တန့်သောဘတ်စ်ကားကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ရန်ဘတ်စ်ကားအမျိုးအစားများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏လုံခြုံရေးနှင့်နှစ်သိမ့်မှုများကို ဦး စွာထားသည့်ဘတ်စ်ကားဘွတ်ကင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှခရီးသွားစဉ်ပတ်0န်းကျင်ဒေသများ၏မြင်ကွင်းများနှင့်အသံများမြင်တွေ့ရပါ။
စင်ကာပူရှိအွန်လိုင်းကူးတို့လက်မှတ်များစာအုပ်စာအုပ်။ Redbus Ferry Service နှင့်အတူသင်ဟာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအရှေ့တောင်အာရှရှိမည်သည့်နေရာကိုသွားနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းကူးတို့ Booking သည်ဘယ်သောအခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။ ယခုတွင်စင်ကာပူမှအွန်လိုင်းမှအွန်လိုင်းမှအွန်လိုင်းမှအွန်လိုင်းမှအွန်လိုင်းမှအွန်လိုင်းမှအွန်လိုင်းမှအွန်လိုင်းမှ Online Online တွင်အွန်လိုင်းတွင်အများဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးကူးတို့စီးနင်းမှုကိုဘွတ်ကင်လုပ်နိုင်သည်။
တစ် ဦး ကမွေ့လျော်သော။ လုံခြုံစိတ်ချရသောခရီးသွားများ!
ဘာအသစ်လဲ redBus - Online Bus Tickets and Ferry Booking App 16.6.1
Online এ কিভাবে বাস বুকিং করবেন।How to book online bus ticket by redbus app.
redBus - Online Bus Tickets and Ferry Booking App 16.5.1
redBus - Online Bus Tickets and Ferry Booking App 16.4.1
redBus - Online Bus Tickets and Ferry Booking App 16.4.0
ရငူင။ယငူ ငာငငငငငငင၇ယယယယၢၢဴယယ၈င။ူဦယ၉၉၉၉၉ယ၉းဦငငယငငငယငင၉ငယငငငသငငယငငယငင.ယယယယငယာငူ ပအလလ္္ခမ၅၅ခစ